Myanmar Law (Lite) APK download | Myanmar Law (Lite) 2.0 FREE download - Dolphin
Myanmar Law (Lite) Apk
ဥပဒေများသည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ပြည်သူအားလုံး၏ လိုအပ်ချက်အထွေထွေကို ထိုဥပဒေများဖြင့် ထိန်းကျောင်း ပဲ့ကိုင် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ပြည်သူတို့ကလည်း မိမိတို့လျှောက်ချင်သော ခရီးကို ထိုဥပဒေယာဉ် ယန္တယားအမျိုးမျိုးတို့ကို ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် ပေါက်မြောက်အောင် လိုက်ပါစီးနင်းကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ရည်မှန်းချက်ခရီးကို အချိန်တိုအတွင်း ခရီးပေါက်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးကြမည့် အမိမြန်မာနိုင်ငံတွင် အရာရာ ဥပဒေနှင့်အညီသာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်သူတစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအသီးသီးကို သိရှိအောင် လေ့လာဖတ်ရှုရပါမည်။ မိမိတို့နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လာသည့် ကိစ္စတိုင်းအတွက် ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်ပါလျှောက်လှမ်းရပါမည်။ သို့မှသာ စည်းကမ်းဥပဒေကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရာ ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီ App ကလေးမှာ Zawgyi Font ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ အဲဒီ Font ကို ဖတ်လို့ရမှ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ် ဥပဒေ ၅၀ ကျော်နဲ့ စပြီး မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဥပေဒတချို့ကို Free ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဥပဒေများကို တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဥပဒေတစ်ခုချင်းစီရဲ့ နည်းဥပဒေများကိုလည်း စီစဉ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒီ App ကလေး အများအကျိုးရှိပြီး ပိုပြီး အသုံးတည့်လာဖို့ သုံးစွဲကြည့်သူများထံမှ အကြံအများကို ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
How to install Myanmar Law (Lite) APK?
1. Check the Android version to verify compatibility of Myanmar Law (Lite) APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure Myanmar Law (Lite) is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Myanmar Law (Lite).Once the download completed,find Myanmar Law (Lite) in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Myanmar Law (Lite) icon in your home screen then tap the icon to open it.
Basic Korean Speaking ( Lite )
Learning Burmese (Lite)